Global Voices teny Malagasy » Venezoela: Mitombo ny tranga-na gripa AH1N1 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Marsa 2011 10:13 GMT 1	 · Mpanoratra Patricia Acosta Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fahasalamàna
Mandia fotoan-tsarotra hafa indray ny Venezoelana amin'izao fotoana izao; tonga ny gripa AH1N1 , araka ny voalazan'ny minisitry ny fahasalamana avy amin'ny fitondrana revolisionera hita ao amin'ny pejy ofisialy  dia niainga avy tany amin'ny faritanin'i Mérida  tany amin'ny tapaky ny volana marsa tany ho any ity valan'aretina ity. Misy kosa anefa ny filazana hafa avy amin'ny holafitry ny siantifika sy ny dokotera ao Venezoela, manambara  fa efa tamin'ny voalohany volana febroary no niavian'ny aretina ary niainga tany amin'ny faritanin'i Guárico .
Na avy aiza anefa no marina amin'izany fanambarana izany na avy aiza dia niparitaka haingana tany amin'ny faritany hafa tao amin'ny firenena ny valan'aretina. Nanomboka tamin'ny tranga miisa 12  izany ka tafakatra 382  sy fahafatesan'olona 4 tao anatin'ny iray volana.
Ho fepetra fisorohana amin'izay mety ho fielezan'ny valan'aretina dia nanapa-kevitra ny governoran'ny faritanin'i Mérida , Marcos Díaz Orellana hampiato ny fianarana ao amin'ny Anjerimanontolon'i los Andes.
Mazava  ny torolalana avy amin'ny minisitra Eugenia Sader amin'ny fanaovam-bakisiny:
Ary toy izao kosa ny torolanana mikasika ny fisorohana :
Ankoatra izany dia nanambara ny holafitry ny siantifika sy ny dokotera ao Venezoela fa :
Indreto indray misy resaka hita ao amin'ny Twitter. Nilaza i Geraldine Capriles (@Gecacapri ) :
Fampahafantarana avy amin'i Carmen Ramia (@carmenramia ) informa:
Nampirisika ny mpanaraka azy amin'ny Twitter i Miguel Mendoza (@miguemendoza ) hanao vakisiny ary i Manuel Parra Morán (@manmoran ) kosa naneho hevitra hoe:
Ny Dr. Rigoberto Marcano (@rigotordoc ) kosa nanome endrika politika ny toedraharaha tamin'ny firesahana momba ny filoha Hugo Chávez ho “ny fitondrana.”
Mazava, tsy nampanao vakisiny ny fitondrana tamin'ny 2010 raha tokony ho nisy izany RT @UNoticias : maro ny olona miady amin'ny vakisin'ny #AH1N1
Maneso kosa i Gonzalo Rodriguez (@ponchalo2012 ) :
GabO! (@gabocumarin)  niresaka indray ny karabin'ny filoha Chávez en su tuit:
Nilaza ny filoha @chavezcandanga  fa misy ny loharanombola iadiana amin'ny #AH1N1 fa tsy misy kosa ny fitaovana ilaina hanaovana ny fitsaboaka. Mampanahy izy izany!
Efa naka fanapahan-kevitra ny olom-pirenena sasany nandeha nankany amin'ny fivarotam-panafody tsy miankina hividy ny vakisina mba tsy ho tratran'ny viriosy. Saingy noferan'ny minisiteran'ny fahasalamana ihany koa ny azon'izy ireny hahalalana ny isa marina. Locatel, tambajotram-pivarotam-panafody malaza iray ohatra dia nikomandy vakisiny 1500 tamin'ny minisitera saingy 29 monja no azony, ankoatra ireo efa te-hatao vakisiny miady amin'ny AH1N1 ao anaty lisitra fiandry. El Nacional  [es] nilaza fa “Vakisiny enti-miady amin'ny H1N1 in-telo no ho tonga any Venezoela mialoha ny faran'ny herinandro, ny minisitry ny fahasalamana Eugenia Sader kosa nilaza fa amin'ny Alatsinainy 28 Marsa izany.
Ny alahady 27 marsa, dia nanamarina ny filoha Chávez nandritra ny fandaharana “Aló Presidente” fa “Efa misy 382  ankehitriny ny tranga-na gripa AH1N1.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/03/31/15717/
 pejy ofisialy: http://www.mpps.gob.ve/modules.php?name=News&file=article&sid=2520